မောင်စေတနာ: Huawei G730-U00 ကို Color OS တင်ခြင်း
Huawei G730-U00 ကို Color OS တင်ခြင်း
Huawei G730-U00 ကို Color OS တင်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။ တင်ချင်သူများအတွက် အပင်ပန်းခံ ရေးသားလိုက်ပါ၏
ဦးစွာ ပထမ ဒေါင်းယူကြပါကုန် . . .
3. Color os Rom
၁။ ဒေါင်းလို့ ပြီးပါက CWM Zip ဖိုင်ကို ဖြေထားပါ . . .
၂။ Flash Tool ကို zip ဖြေပြီး ဖိုဒါထဲမှာ ပါသော flash_tool ဆိုတာကို ဖွင့်ပါ။
၃။ Download Agent အောက်တွင် အကွက်လွတ်ရှိပါတယ်။ Scatter-Loading File ဆိုတဲ့အကွက်အတွက် Scatter-loading ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ zip ဖြေထားသော CWM ဖိုဒါထဲမှ Notepad ဖြင့် ရေးထားသော MT6582 ဆိုတာလေး ရွေးပြီး Open လိုက်ပါ။
၄။ အောက်ကွက်တွင် စာတန်းများ တန်းစီကျလာလိမ့်မယ်။ အဲဒီစာတန်းတွေထဲက recovery ဆိုတဲ့အကွက်ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Location အကွက်ကို double click လုပ်လိုက်ပါ။ Open File box ကျလာရင် CWM ဖိုဒါထဲက HUAWEI-G730-U00_131128__recovery_140118-103300 ကိုရွေးပြီး open လုပ်ပါ။
၅။ ပြီးပါက Flash Tool တွင်အပေါ်ဆုံးရှိ Download ကိုနှိပ်ပါ။
၆။ ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ဘထ္ထီရီကို ဖြုတ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ပါ။ ဘထ္ထရီ ပြန်တပ်ပါ။ flash tool တွင် အလုပ်လုပ်နေလိမ့်မယ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီး အမှန်ခြစ်လေး ပေါ်လာပါက CWM အဆင့်ပြီး၏။
(မှတ်ချက် - ကွန်ပျူတာနှင့် မသိပါက ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်တဲ့အချိန် ကွန်ပျူတာတွင် Hisuite ပေါ်ပါက အင်စတောလုပ်ပါ။ )
၁။ SD Card ကို Format ချထားပါ။ ကတ်ထဲကို G730-U00 Color OS ကို zip မဖြေပဲ ထည့်လိုက်ပါ။
၂။ ဖုန်းကို ပိတ်ထားပါ။ Volume + နှင့် power ကို ပူးတွဲနှိပ်ပါ။ CWM ထဲရောက်ပါက Install zip from sdcard ကို ရွေး၍ ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်။ Choose zip from sdcard ကို ထပ်ရွေးနှိပ်။ အစောပိုင်းကော်ပီကူးထည့်ထားသော Color OS ကို တွေ့လိမ့်မယ်။
၃။ color os ကို ရွေးနှိပ်။ Yes ကို ထပ်နှိပ်။ သူ့အလုပ် သူလုပ်နေလိမ့်မယ် ခဏစောင့်ပါ။ complete ဖြစ်ပါက reboot now ကို ရွေးလိုက်ပါ။
၄။ ပြန်တက်လာတဲ့အချိန် Color OS လေးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။
(မှတ်ချက် - မိနစ် ၂၀ နီးပါး စောင့်လို့ Color OS ကမတက် ပါက ဘထ္ထရီ ဖြုတ်ပြီး Volume + နှင့် power ကို နှိပ်၍ CWM ထဲဝင်ကာ Reset ချလိုက်ပါ။ အိုကေလိမ့်မယ်)
မြန်မာဖောင့်သွင်းရန်အတွက် SD Card ထဲကို UPDATE-SuperSU-v1.94 ထည့်ပြီ . . . CWM ထဲကနေ တင်လိုက်ပါ။ root ရပါက MMAIO Font Changer နဲ့ မြန်မာဖောင့်သွင်းပါ။
google app များတွက်လည်း အလားတူလုပ်ပါ။
MIUI တင်ချင်ရင်လဲ ထိုနည်းတူစွာပင်။ CWM တော့ ထပ်လုပ်စရာ မလိုပါ။
ခွန် ၀ီလျံ ထွန်း မှ ကူညီပြသပေးသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
12 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်:
colour OS ရဲ. ဒေါင်းလုဒ်လင့်ထဲက flashtool နဲ. CWM က link တူနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တင်ပေး
5:04 PM, May 08, 2015
Mg Saytanar said...
3:28 PM, May 10, 2015
Your download expired လို. ပြနေပါတယ်။ ဒေါင်းလို. မရပါဘူးခင်ဗျာ။
12:23 PM, May 12, 2015
ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ CWM မှာ
10:40 AM, May 13, 2015
ဟုတ်ကဲ့ ရသွားပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
12:29 PM, May 13, 2015
SD card ထဲ rom file ထည့်ပြီး install လုပ်တာ zip file ကို မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်အကို
10:28 AM, June 08, 2015
Udk U said...
please reupload an another link... mediafire or dropbox..../ i can't download form pcloud..help me...
6:20 AM, July 21, 2015
Brayan Luiz said...
ဘာ error ​တွေရှိလဲခင်​ဗျ Gesture ​တွေအကုန်​အလုပ်​လုပ်​လား???
4:34 PM, December 16, 2015
NayLin KOKO said...
Cwn သွင်းp volume+ power key နှိပ်​ရင်​
2:52 PM, January 24, 2016
4:33 PM, August 19, 2016
Thiha Thant said...
8:43 PM, November 06, 2016